स्थानीय कलाकार लाहुरे र बिपुलको अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार डिप्लो र मोसँग सहकार्य - Mero Tribune
Home Uncategorized स्थानीय कलाकार लाहुरे र बिपुलको अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार डिप्लो र मोसँग सहकार्य
स्थानीय कलाकार लाहुरे र बिपुलको अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार डिप्लो र मोसँग सहकार्य
डेनिस ब्राण्ड टुबोर्गले, पहिलो सांगीतिक अभियानको सफलता पश्चात, ‘टुबोर्ग ओपन’फेरि आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । जसले यस वर्ष विश्वभरका सांगीतिक क्षेत्रका प्रभावकारी कलाकारहरुको खोजी गरी ‘डिप्लो’ र ‘मो’को सहकार्यमा नयाँ सांगितीक ट्रयाकहरु बनाउने भएको छन् ।
टुबोर्ग ओपनले अभियानको यस दोस्रो वर्षमा फेरि एकपटक उत्कृष्ट संगीतकारहरुसँग मिलि केही विशेष रचना गर्दैछ । एउटै विश्वव्यापी सन्देश भएको विश्वभरका प्रत्येक कलाकारले आफ्नो स्थानिय संस्कृति र विविधता झल्काउने आफ्नै शब्दहरुका साथ गाउनेछन् । टुबोर्गको एसिया र युरोप भरिको प्रमुख बजारका कलाकारहरुले मानिसहरुलाई आफ्नै तरिकामा ‘ओपन टु मोर’हुन पे्रेरित गर्नेछन् जसले भरोसाको शक्ति र खुल्ला मनोवृत्तिले हामी सबैको जीवनको मूल्य बढाउँछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ ।
अमेरिकी निर्माता तथा डिजे, ‘डिप्लो’ जो अघिल्लो वर्षको अभियानमा सहभागी थिए, डेनमार्ककालोकप्रिय कलाकार, ‘मो’सँग फेरि आएका छन् । उनीहरु मिलि ‘स्टे ओपन’ नामक ट्रयाक रचना गरेका छन् । जसमा, विश्वभरका कलाकारहरुलाई ‘ओपन टु मोर’हुनुको औचित्य, आफ्नै शब्दमा प्रस्तुत गरि पुनःलेखन गर्ने निम्तो गरिएको छ ।
डिजे तथा गायक, ‘ईभान र्डोन’ रसियासँग काम गर्दैछन् भने, भारतसँग ‘विशाल डढलानी’ संलग्न भएका छन्, जसको सांगीतिक प्रभाव बलिउड देखि ईन्डि रक सम्म फैलिएको छ । नेपालमा दुई जना लोकप्रिय स्थानिय कलाकारहरुसँग सहकार्य गरिने छ, लोकप्रिय नेपाली ¥यापर ‘लाहुरे’ र ‘बिपुल क्षेत्रीे’, जो उनको समकालीन लोक संगीतका लागी चिनिन्छन् । गायक–गीतकार ‘लेभान्टे’ले ईटाली मा हुने अभियानको नेतृत्व गर्नेछन् । चीन, बल्गेरिया र म्यानमारका बजारहरुबाट अन्य कलाकारहरु निश्चित हुन बाँकी नै छ ।
यस वर्षको अभियान बारे बोल्दै, डिप्लोले भने,“टुबोर्ग ओपनको दोस्रो वर्षमा पनि सहभागि हुँन पाउँदा निकै उत्साहित छु । यस वर्ष टुबोर्ग हामीमाँझ ‘ओपन टु मोर’ हुने विचारको साथ आएको थियो र ‘मो’ र म ‘स्टे ओपन’ट्र«याकमा काम गरिरहेका थियांै । मानिसहरु धेरै अवस्थामा अन्तरमूखी स्व्भावका हुन्छन् । यो ट्र«याक नयाँ व्यक्ति र नयाँ अनुभवहरुका लागि खुल्ला सोच हुनुपर्ने आवश्यकताको बारेमा रहेको छ ।”
“यस ट्र«याक यस अभियानलाई सुहाँउदो छ र विश्वभरका कलाकारहरु खुल्ला सोच हुनुपर्ने विचारलाई आफ्नो तरिकामा ढाल्न र आफ्नो धारणाहरु थप गर्ने सोच लिएर आईरहनु भएको छ जुन, यस योजनाको सबै भन्दा उत्कृष्ट पक्ष हो ।”
डेनिस गायक तथा गीतकार, ‘मो’ विश्वव्यापी सहकार्य प्रक्रियाका लागि उत्साहितछन् ः“मेरो लागि तयार गरीने अन्तिम सांगितीक ट्र«याकको यात्रा नै उत्कृष्ट रहेकोछ । नयाँ चल्तीहरुकोबारेमा खुल्ला रुपले साेंच्दा, हामीले कहिल्यै नमिल्ने भनेर सोंचेका कुराहरु, कहिले–काही राम्रो सँग मिल्न जान्छ, मलाई यस प्रक्रियामा सिकिने अनुभव गर्न सकिने तथा शुरुमा आफुसँग भएको ट्र«याक पूर्ण रुपले फरक देखिने पक्ष मन परेकोछ र म निकै उत्साहित छु ।”
आफ्नो उत्सुक्ता व्यक्त गर्दै लाउरे ले भने, “टुवोर्गले सधैं नेपालमा सांगीतिक सहकार्य र
कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ र मैले उहाँहरुसँग धेरै स्थानिय कार्यक्रमहरुमा काम गरेको छु । यस पटक टुबोर्ग ओपन ले विश्वभरको सांगीतकारहरुलाई एउटा ओपन अन्तर्राष्ट्रि«य मञ्चमा ल्याएको छ । टुबोर्ग ओपन मा डिप्लो, मो र बिपुल सँग काम गर्न पाउँदा भाग्यशाली र उत्साहित भएको महसुस गरिरहेको छु । यस अभियानबाट, बिपुल र म ओपन फर मोर का लागि टुबोर्ग इन्टरनेशनल सँग केही नयाँ रचना गर्दैछौं ।”
बिपुलले थपे, “टुबोर्ग नेपाल संगीत र सांगीतिक अभियानको सधैं समर्थक रहेको छ । डिप्लो, मो र लाउरे सँगको शानदार सहकार्यमा सहभागि हुन पाउदा उत्साहित छु । मेरो लागि संगीत भनेको खुल्ला सोच बनाउनु हो, जुन बिना हामी कला सिर्जना गर्न सक्दैंनौ । मेरो लागि, टुबोर्ग ओपन कोलाब्रेशन् , सिर्जनात्मक कलालाई संगीतको माध्यमबाट बढाउनु हो । संगीत भनेकै नयाँ कुराहरु सिक्नु र नयाँ विचारहरु खोज्नु हो । संगीतको माध्यमबाटै हामीले डिप्लो र मो जस्ता कलाकारहरुसँग सहकार्य गर्न पायांै र टुबोर्ग ओपन मा सहभागी हुन पाउँदा मलाई सम्मानित भएको महसुस भएको छ ।”
उक्त विश्वव्यापी ट्र«याकको ११ मे २०१८ मा रिलीज भएको थियो र स्थानिय ट्र«याकहरु भने जुनमा रिलीज हुनेछन् जसमा विश्वव्यापी र स्थानिय कलाकारहरुको आफु ‘ओपन टु मोर’भएको यात्राको कथा हुनेछ । यस अभियान अन्–प्याड र डिजिटल का साथ चल्नेछ र वर्षको पछि डिप्लो र मो तथा स्थानिय कलाकारहरुको साथ लाईभ सांगीतिक कार्यक्रम गरि अभियान समापन गरिनेछ ।
गोर्खा ब्रुअरी प्रा.ली. का मार्केटिङ डाईरेक्टर, बैभब शर्मा का अनुसार, “हामी टुबोर्ग अन्तर्राष्ट्रि«य ‘डिप्लोे’ र ‘मो’ लाई यहाँका स्थानिय कलाकार ‘लाहुरे’ र ‘बिपुल क्षेत्रीे’सँग टुबोर्ग ओपन गानामा सहकार्यको लागि घोषणा गर्न पाउँदा निकै उत्साहित भएकाछौं । यो हाम्रो कलाकारहरुको लागि ठूलो अवसर हो र टुबोर्ग नेपालको लागि यो सहकार्य निकै अविस्मरणिय रहने छ ।”
Previous articleलूट निर्माता वाग्ले नक्कली नोटसहित पक्राउ, आखिर कुन पासाको डिमाग चलेछ !
Next articleयुट्युब ट्रेडिङको नं १मा ‘बोल माया’
सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गरेसँगै खोप लगाउने बढे